Ahoana ny fampidinana ny rindrambaiko vaovao amin'ny wallpaper avy amin'i Google | Vaovao momba ny gadget
Ny ankamaroan'ny mpampiasa, farafaharatsiny amintsika izay matetika mampiasa ny finday avo lenta ho an'ny zava-drehetra, toy ny manamboatra ny afovoan'ny efijery. Ao amin'ny Google Play Store dia afaka mahita fampiharana be dia be isika mamela antsika hisintona sary mihetsika isan-karazany amin'ny lohahevitra rehetra. Fa azontsika atao ihany koa ny mampiasa ny sarintsika manokana hanaingoantsika manokana ny finday avo lenta. Ireo tovolahy ao amin'ny Google dia nandefa fampiharana rindrambaiko vaovao ahafahantsika misafidy sary marobe sy sary mihetsika hapetraka ho valin-drakitra.
Ity rindranasa ity dia manolotra antsika ireo sary voasokajy amin'ny sokajy samihafa: The eto an-tany izay ahitantsika sary marobe nalain'ny Google Earth; Landscape, Cityscapes, fiainana, lamba ary sary mivantana. Ny lohahevitra tsirairay dia manome safidy nify ho antsika mandra-pankaleo.
Fa raha iray amin'ireo mpampiasa te hanova ambadika isan'andro ianao, ity rindrambaiko ity dia manome antsika ny mety ihany, fa eo anelanelan'ny sary amin'ny sokajy iray ihany. Raha iray amin'ireo mpampiasa efa mankafy Android 7 Nougat izahay dia mamela anay ny fampiharana mifidy ambadika ho an'ny efijery hidin-trano asehoy anay sary hafa noho ilay namboarinay ho lasa ambadika.
1 Endri-javatra amin'ny Google Wallpaper
2 Antsipirian'ny Google Wallpaper
Endri-javatra amin'ny Google Wallpaper
DAnkafizo ny fanangonana izay tsy mitsahatra mitombo. Midira sary avy amin'i Google Earth, Google+ ary mpiara-miasa hafa.
Ataovy avo roa heny ny fahafinaretana. Mametraha rindrina fanidiana hidin-trano ho hitan'ny olon-drehetra ary iray hafa amin'ny efijery an-trano ho anao ihany. Android ™ 7.0 (Nougat) na ambony no ilaina.
Atombohy amin'ny fomba hafa ny isan'andro. Safidio ny sokajy ankafizinao ary isan'andro dia hanana sary mivalona vaovao ianao.
Antsipirian'ny Google Wallpaper
Nohavaozina farany: 19 Oktobra 2016
Mitaky kinova Android 4.1 na avo kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ahoana ny fampidinana ny fampiharana Google Wallpapers vaovao
Smach Z, Gamer PC iray manontolo eo am-pelatananao